🥇 accounting yokungabikho emsebenzini
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 661
Ividiyo ye-accounting yokungabikho emsebenzini
Myalelo we-accounting ngokungabikho emsebenzini
Ukubalwa ngokungachanekanga kokungabikho kwazo naziphi na izenzo emsebenzini kunye nokungalambeki, indlela ayikokuphumelela, kodwa kukuhla kwenqanaba kunye nokusebenza kweshishini. Ukugcina iirekhodi ngokuchanekileyo, ngokungabikho kweempazamo kunye neziphumo eziphantsi, indlela yenkqubo eyodwa kunye nenkqubo ekhethekileyo iyafuneka enokusombulula imiba kunye nokwenza ngcono iiyure zomsebenzi ngaphandle kwempazamo kunye nobunzima. Kukho ukhetho olukhulu lwezicelo ezahlukeneyo kwimarike, kodwa inkqubo ye-USU yeSoftware ngumncedisi obalulekileyo ngexabiso elifikelelekayo kunye nemirhumo yokubhalisela simahla, nokwahlula amalungelo omsebenzisi ahlukile kwabanye ekusebenzeni nakwisikhundla esigciniweyo. Iimodyuli kunye neelwimi zikhethwe ngokukodwa kwintlangano nganye, ngesicelo kunye nokunceda wonke umntu. Abasebenzi ngokuzimeleyo khetha izixhobo, kuthathelwa ingqalelo umsebenzi kwishishini. Kwimowudi yolawulo oluninzi lwamajelo, abasebenzi bayakwazi ukufikelela kwisicelo ngokungena kwiakhawunti phantsi kokungena ngemvume, ukufaka idatha kwizigodo kwi-accounting nakwimisebenzi yomsebenzi womqeshwa ngamnye, ukurekhoda ukungena kunye nokuphuma, ukungabikho, kunye ikhefu lesidlo sasemini. Zonke iintshukumo ziboniswa kwisicelo, kufakwa yonke into eyenziwa ngumsebenzisi, inika isikhokelo sedatha echanekileyo. Kwimowudi yabasebenzisi abaninzi, iingcali zinokutshintshiselana ngedatha, zinxibelelane, zidlulise idatha kunye nemiyalezo, zombini kwinethiwekhi yendawo nakwi-Intanethi. Abaphathi banokuhlalutya kwaye bagcine iirekhodi zomntu ngamnye ophantsi, bebona idatha ngexesha lokwenyani kwisixhobo sabo, esibonisa isenzo ngabasebenzi, ngomsebenzi nangokubakho kwabo, besenza iitafile kunye neelog ngokufunda ngokuchanekileyo. Ukungabikho kolwazi kwimisebenzi eyenziweyo ixesha elide, inkqubo yokubalwa kwemali ivelisa ingxelo ngokuzenzekelayo, yazisa umntu ophetheyo ukusombulula le ngxaki, kuthathelwa ingqalelo amanyathelo amatsha kunye nenani lomsebenzi owenziweyo, kungekho zimpazamo kunye nolwaphulo.
Abasebenzi banokwenza ngaxeshanye imisebenzi yabo, bethathela ingqalelo ubukho bengxelo nganye, apho inkqubo ifunda khona ulwazi kunye nokubala elona xesha lisetyenzisiweyo, kuthathelwa ingqalelo iishedyuli zomsebenzi, ukubala umvuzo wenyanga. Kuyenzeka ukuba ubone yonke imisebenzi yomqeshwa ngamnye kwimowudi ekude, enekhompyuter ephambili ekuboniswa kuyo lonke ulwazi ngohlobo lweefestile ezahlukileyo, eziphawulwe ngemibala eyahlukeneyo kunye nedatha enikezelweyo ngokuxhomekeke kwimisebenzi yomsebenzi. Ukungabikho kwedatha kubasebenzi, le nkqubo ikhupha ulwazi, inikezela ngolwazi oluneenkcukacha kunye nolusexesheni, oluvumela ukungena kwiwindows eyahlukileyo yomqeshwa okhethiweyo, ukubona lonke ulwazi ngemisebenzi, ngexesha lomsebenzi, umsebenzi, ukungabikho, njl.
Hlaziya ukusebenza kwesoftware kwaye uvavanye onke amathuba, afumaneka ngohlobo lweedemo, olufumaneka simahla. Unokubonisana nayo yonke imiba kunye neengcali zethu, ezingonwabileyo ukucebisa ngamanani abonisiweyo.
Ukwenza i-akhawunti ngokungabikho komsebenzi kunye nokulawulwa kwemisebenzi kunye nexesha lenziwa ngokuzenzekelayo, kunceda ekuphunyezweni kwemisebenzi esekwe, ukuzenzekelayo zonke iinkqubo, uxanduva lomsebenzi ngamnye, ukunciphisa umsebenzi kunye neenzame zeengcali.
Ukuhanjiswa kwedatha kwenziwa ngaphandle kokungabikho kwezicelo ezongezelelweyo okanye izixhobo ezakhelweyo kunye nekhompyuter ephambili, ebonisa izinto ezichanekileyo zokuhlalutya ukusebenza komsebenzi owenziweyo, ngokungabikho kweentlobo ngeentlobo zeempazamo kunye notyelelo kwiindawo ezahlukeneyo kunye neqonga lokudlala .
Ukusebenza okuzenzekelayo kwemisebenzi kuya kuncitshiswa yimisebenzi kunye nezixhobo zeshishini.
Umphathi, ngokungafaniyo nabaphantsi kwakhe, unamathuba angenamda, ahlulelwe elowo ngokwenqanaba lobalo-mali olusemthethweni, ebonelela ngokhuseleko olukumgangatho ophezulu wokufundwa kolwazi. Ukulawulwa okude kwenkqubo yolwazi olumanyeneyo ngokungabikho komsebenzi owongezelelweyo kubonelela ngamaxwebhu ayimfuneko kunye nolwazi olugcinwe kwinguqulelo yombane kwiseva ekude. Xa kungekho injini yokukhangela ngokwemeko, umncedisi ongenakubuyiselwa, ulungiselela ixesha lokusebenza kweengcali. Idatha inokufakwa ngesandla okanye ngokuzenzekelayo ngokungenisa izinto ezivela kwimithombo eyahlukeneyo. Xa kubalwa ixesha lokusebenza, ulwazi oluneenkcukacha ngomsebenzi, ubume nokungabikho kwabasebenzisi kwiindawo zokusebenzela, ziyarekhodwa, kuthelekiswa nokubala inani elinye leeyure ezisetyenzelwe umvuzo olandelayo.
Kwimowudi ekude, idatha inokuhanjiswa ngaphezulu kwenethiwekhi, ukungqamanisa izixhobo zokusebenza zomsebenzisi kwisicelo, xa kungekho ngxaki kwi-Intanethi, ukubonisa kwiscreen somfundi zonke iifestile ezivela kwiiphaneli zomsebenzi zabasebenzi.
Ukwahlulahlulwa kwazo zonke izixhobo kudidi olunye okanye kolunye kuvumela ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo ukugcina iirekhodi zedatha, ngaphandle kokuthintela kwizalathi zobungakanani kunye neefomathi, iitafile kunye namaxwebhu.
Ulwazi kunye nemiyalezo ithunyelwa ngexesha lokwenyani ngaphezulu kwendawo okanye kwi-Intanethi, ngaphandle kweengxaki. Ukuphathwa kwabasebenzisi abaninzi kunye neendlela zolawulo zibonelela bonke abasebenzi ngokufikelela ngexesha elinye kwinkqubo yobalo phantsi kwamalungelo kunye namandla, ikhowudi yokufikelela. Umqeshwa uyakwazi ukwenza imisebenzi abayinikiweyo, efakwe kumbono oqhelekileyo kumcwangcisi weenjongo kunye nemisebenzi. Kwimeko yokungabikho ixesha elide kunye nokungabonakali kwentshukumo esebenzayo kunye nemisebenzi, inkqubo ezenzekelayo isebenza ngokunika ingxelo ngemiyalezo ephumayo, etshintsha imibala yesalathiso. Ngokugcina umkhondo womsebenzi wamva nje, kunokwenzeka ukuhlalutya ukusebenza kunye nokubanakho komqeshwa ngamnye.
Isinxibelelanisi sesicelo sobalo silungiselelwe umsebenzisi ngamnye ngokuzimeleyo, ngokukhetha iimodyuli eziyimfuneko, isplash screen, kunye nesampulu yokuvelisa amaxwebhu. Iimodyuli zikhethwe ngokukodwa kwintlangano nganye, kunye nethuba lokuphuhlisa i-logo nganye. Ukwenza i-Akhawunti kunye nokubeka iliso emsebenzini xa usebenzisa izixhobo zethu kunceda ukuphucula umgangatho kunye nokusebenza. Ikopi yogcino lwayo yonke ingcaciso igcinwa ngokuzenzekelayo kwiserver, iqinisekisa ukugcinwa kwexesha elide kungatshintshi. Uyilo lwamaxwebhu kunye neengxelo lwenziwa ngendlela ezenzekelayo, ngaphandle kwezithintelo. Umsebenzi wenziwa phantse kuzo zonke iifomathi zeOfisi yeMicrosoft.
Ukungabikho konxibelelwano lwezixhobo ezahlukeneyo zobuchwephesha akunampembelelo kwimveliso kuphuhliso lweshishini, yiyo loo nto inkqubo yethu ibonelela ngolungelelwaniso kunye nokubalwa kwezixhobo kunye nokusetyenziswa.